Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay Dagaal ka dhacay Galgaduud.
Taliska Ciidanka Xooga dalka Soomaaliyeed ayaa Faah Faahiyay dagaal culus oo u dhexeeyay Ciidanka Milateriga Soomaaliya gaar ahaan qeybta 21-aad iyo Dagaalamayaasha Al-shabaab oo saakay aroortii ka qarxay deegaano ka Tirsan Koonfurta galgaduud.
Sidoo kale Taliyihu waxaa uu tilmaamay in khasaaro kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay gaarsiiyeen Alshabaab islamarkaana ay sii wadi doonaan Dagaalka ka dhanka ah Alshabaab.
« Shirkii Afisyooni oo La balaarinayo si ay uga Qeyb-galaan Madaxdii Hore.
Dhageyso Shirkii Afisyooni ka socday oo Burburay. »